China Mould inogadzira Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kugadzira chakuvhuvhu (Kufa kugadzira) ndiyo nzira yekugadzira zvinhu zvinoenderana neforoma dhizaini dhizaini, uchishandisa michina yekucheka, kupisa machining, kurapwa kwepamusoro uye kurapwa kwekupisa, uye pakupedzisira kuunganidza mativi ese muchimiro maererano nedhizaini yekugadzira.
Kugadzira chakuvhuvhu & kugadzira iri indasitiri yakakosha kwazvo muindasitiri yemazuva ano yekugadzira. Inopa yakakosha maitiro ekushandisa ekukura kukuru, kugona kwepamusoro uye mhando yepamusoro yekugadzirwa kwemaindasitiri.
Chii chinonzi mold?
Mould (chakuvhuvhu, kufa) inozivikanwa se "amai veindasitiri", inova yakakosha michina yekuita kuti ibudirire kwazvo, kugona kwakanyanya uye kugadzirwa kwakakura muindasitiri yemazuva ano yekugadzira. Mukugadzirwa kweforoma indasitiri, kuumbwa kwakasiyana-siyana uye maturusi zvinoshandiswa kuwana izvo zvinodiwa zvigadzirwa nejekiseni, kufuridza kuumba, extrusion, chakuvhuvhu kukanda kana kugadzira, simbi, kutsika nedzimwe nzira. Muchidimbu, chakuvhe chishandiso chinoshandiswa kugadzira zvinhu zvekuumba. Ichi chishandiso chinoumbwa nezvikamu zvakasiyana, uye maforoma akasiyana anoumbwa nezvikamu zvakasiyana. Inonyanya kuziva kugadziriswa kwechimiro chechinhu nekuchinja mamiriro ezvinhu echinhu chichiumbwa. Inozivikanwa se "mai veindasitiri".
Chii muforoma mukugadzira?
Anenge ese mafuru akagadzirwa nesimbi, uye 90% yawo akagadzirwa nesimbi.
Pasi pekuita kwesimba rekunze, iyo billet yesimbi inova chishandiso chekugadzira ine chaiyo chimiro uye saizi. Inoshandiswa zvakanyanya mukutsika, kuumba kwekuumba, kutonhora musoro, extrusion, poda simbi zvikamu kudzvanya, kumanikidza kukanda, pamwe neinjiniya mapurasitiki, rabha, keramiki uye zvimwe zvigadzirwa zvekumanikidza kana jekiseni kuumbwa. Iyo Foroma ine yakatarwa gandiwa kana yemukati mhango chimiro, uye isina inogona kupatsanurwa zvinoenderana nemakondomu chimiro (kuvhara) nekushandisa iyo contour chimiro nemupendero. Chimiro chemukati mhango chinogona kushandiswa kuwana iwo anoenderana-matatu mativi chimiro chebillet. Mould kazhinji inosanganisira zvikamu zviviri: chinofambiswa muforoma uye yakatarwa muforoma (kana chibhakera uye concave muforoma), iyo inogona kupatsanurwa uye kusanganiswa. Kana zvikamu zvaparadzaniswa, mabara acho anopinzwa muforoma mhango kuti aumbe kana avharwa. Mould chishandiso chaicho chine chimiro chakaomarara uye chinotakura simba rinobhururuka rebillet. Iyo ine yakanyanya kudiwa pane chimiro chesimba, kuomarara, kuomarara kwepasirese, kuomarara kwepamusoro uye kugadzirisa kurongeka Chikamu chekuvandudza chekugadzirwa kweforoma ndechimwe cheakakosha mamaki eiyo nhanho yekugadzirwa kwemishini.
Maitiro ekugadzira chakuumbwa anosanganisira: dhizaini dhizaini, kugadzira mold, mold kuongorora uye bvunzo kupfura, mold modification uye kugadzirisa, uye kugadzirisa mold.
Mould kugadzira kugadzira inowanzoonekwa kuburikidza nekugadzira, kucheka, kupisa kurapwa uye kuungana uye mamwe maitiro. Kuti uve nechokwadi chekugadzira mhando yeforoma uye kudzikisa mutengo wekugadzira, izvo zvinhu zvinofanirwa kuve nekukanganisa kwakanaka, kutema machinability, kuomarara uye kugaya, uye zvakare inofanira kuve iine oxidation diki, decarbonization senzwi uye kudzima deformation kutsemuka kwetsika. Kucheka kunotora makumi manomwe kubva muzana eiri basa rekugadzirisa kugadzira muforoma. Nhanho inonyanya kukosha ndeyekutora mhango inosangana nezvinodiwa zvechimiro, chiyero chakaringana uye mhando yepamusoro, pamwe nemaitiro ese.
The Foroma nokuita kwacho
Iyo simbi isina chinhu yekugadzira chakuvhuvhu yakatenderedzwa uye kuumbwa mune yesimbi chirimwa, uye chakuvhuvhu chirimwa chinogona kusarudza zvakananga kutenga. Kugadzira chakuvhuvhu kugadzira mabara esimbi aya muforoma dzinogona kuburitsa zvigadzirwa mukugadzirwa kwakawanda. Kugadzirwa kweforoma kunosanganisira dhizaini dhizaini, machining uye kuungana kweiyo mold musimboti uye chakuvhuvhu base.
1.Mold dhizaini inopedzwa nevanyanzvi mainjiniya. Mould dhizaini ndiyo yakajairwa uye hwaro hwese kugadzirwa kweforoma. Zvinoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa dhizaini uye yekumusoro pamusoro kunyatso, nguva dzekushandisa uye zvinotarisirwa kuburitsa, pamwe nekugadzirisa kwejekiseni muchina wekugadzira, injinjini inofanira kusarudza zvine simbi simbi yechikamu chega chega cheforoma uye kuona chimiro uye maitiro eforoma. Iyo rationality yeforoma dhizaini inosarudza iyo yekugadzira kunetsekana, mutengo, hupenyu hwebasa, kugadzirwa uye chigadzirwa mhando yeiyo fomu.
Muforoma rudzi rwemidziyo inodhura. Mukugadzirwa, mainjiniya edu anoshandisa software kuongorora uye kutevedzera kugoverwa kwezvikamu, kuyerera nzira, jekiseni poindi uye kunyangwe chimiro chezvikamu.
2. Kugadzira chakuvhuvhu. Mould billet inogadziriswa nemuchina chishandiso zvinoenderana neinjiniya dhizaini uye maitiro magwaro. Kazhinji, ekucheka muchina maturusi nemidziyo inoshandiswa kugadzira kuumbwa kunosanganisira CNC, EDM, WEDM, lathe, grinder, polishing muchina, nezvimwe. Zvigadzirwa zvemberi uye zvakaringana zvemuchina zvinogona kuvandudza zvakanyanya kujeka kweiyo mold, kupfupisa iyo yekugadzira kutenderera uye kudzikisa mutengo. Mhando dzakasiyana dzevhu dzinoshandisa musanganiswa wakasiyana wemuchina maturusi: jekiseni kuumbwa uye kufa-kukanda mafuru anowanzoshandisa CNC, EDM uye WEDM. Stamping molds uye extrusion molds inowanzoshandisa CNC uye WEDM
3. Ungano gungano. Ungano yeforoma inoenderana nehunyanzvi. Inosanganisira die core, slide block, giraidhi positi, ejection mashandiro, kuenzanisa pakati pekufa furemu nemota, inopisa moto mumhanyi musangano, pamwe nechikamu chisingatemwe, uye yekupedzisira yakazara gungano. Iyo yakakwira iko kururamisa kwekugadzira, iko kushomeka kwebasa rekufa kwegungano, kupfupisa iko kutenderera kutenderera uye kudzikisa mutengo. Mushure mekupedzwa kwegungano refa, zvinodikanwa kuyedza, kuongorora, kugadzirisa uye kugadzirisa iyo kufa kusvikira yagona kugadzira zvigadzirwa zvine hunyanzvi nezvimwe zvakawanda.
Chaizvoizvo muforoma kugadzira maitiro
EDM-Magetsi Kubuda Machining
WEDM-waya electrode yekucheka
Kukodzera uye unganidza anoumba
Kambani yeMestech inonyanya kuita mupurasitiki yekugadzira uye jekiseni yechigadzirwa, pamwe neforoma zvigadzirwa (simbi kufa-kukanda kufa, kutsika kufa) kugadzira uye simbi yekugadzira zvikamu.
Pashure: Mould dhizaini
Zvadaro: Maitiro ekugadzira epurasitiki zvikamu